Wadanka ugu ammaanka fiican Afrika oo la shaaciyay Somalia xagee kaga jirtaa? |
Wadanka ugu ammaanka fiican Afrika oo la shaaciyay Somalia xagee kaga jirtaa?
Dalka Kenya ayaa safka hore ugu jira Waddamada ugu amniga xun qaaradda Afrika,waxaana ay dhinaca qatarta kala mid tahay Soomaaliya ama ka liidataaba sida uu daabacay Wargeyska The Star ee Dalka Kenya ka soo baxa.
Kenya waxaa ay booska 118aad ka gashay 141 Dal oo Dunida oo dhan ah oo laga sameeyay sahan Nabadeed,waxaana ay taasi muujisay in AMniga Kenya uu aad u liito.
Dadka Kenyaanka ah ayaa joojiyay in ay socdaan Habeenkii iyaga oo dareemaya Cabsi amni,waxaana sidoo kale ay ka wal walaan dadka dersikooda ah ee ay wada degganyihiin.
Zambia ayaa gashay booska 122aad iyada oo ay raacaan Waddadama Nigeria,Uganda131,Botswana134,Koofurta Sudan 136 Koofurta Afrika ayaa iyana kaga jirta kaalinta 138aad, Laberia ayaana noqotay dalka ugu amniga liita Adduunka oo dhan.
Rwanda ayaa kaalinta 21aad ka gashay sahankan taas oo ka dhigeysa in Rwanda ay tahay Waddanaka ugu nabadda iyo amniga wanaagsan Qaaradda Afrika.
Masar 31, Niger 41, Ethiopia46, Burkina Faso 53, Somalia 72, Ghana 89, Tanzania 99 iyo Burundi 110.waxaana Warbixinta sahanka ah loo sameynayay heerka kalsoonida Booliska Waddan waliba ee 12kii bilood ee 2014kii.
Singapore ayaa noqotay Dalka Adduunka ugu Nabadda badan kadib markii la ogaaday in 91% muwaaddiniinta Waddankaasi ay ku kalsooniyiin Booliska wadashaqeyn fiicanna ka dhaxeysa, iyaga oo habeenkiina si nabad ah ku lugeeya Waddooyinka waxaana soo raaca Waddamada Uzbekistan iyo Hong Kong.
Sahan kan waxaa uu muujiyay in 10kii qof ee ka mid ah Dadka Adduunka ay ku kalsoonyihiin Booliska taas oo micnaceedu yahay in 63% dadka Adduunka iyo Booliska Waddamadooda ay wadashaqeyn fiican ka dhaxeyso islamarkaan 60% ka mid ah ay Waddooyinka mrayaan Habeenkii iyaga oo aan Cabsi filaneyn.
6 qof ee Adduunka qof ka mid ah ayaa sheegaya in uu lahaa Lacag ama hanta laakiin laga dhacay Sanadkaasi 2014ka. Waxaa ay warbixinta dhinaca kale dalka Liberia ay ka badbaadday Cudurkii Eboola kaas oo ku dhacay 3 qof ee Liberian ah qof ka mid ah,waxaana 35% kaliya ay dareemaan Nabad marka ay lugeynayaan Waddooyinka Habeenkii.
Warbixinta ayaa lagu wareystay 142,000 oo qof oo ku kala nool Waddamo gaaraya 141 Dal oo ku yaalla Caalamka iyada oo ujeeddada ugu weyn ay hayd in la ogaado heerka Nabadda Waddamada iyo kalsoonida dhextaalla Booliska iyo Shacabka